Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePeru » Kwabulawa abangama-32, abangama-20 benzakala njengoko ibhasi iwela emaweni ePeru
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zasePeru • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Iingozi zendlela zixhaphakile ePeru ngenxa yokubalekiswa kweemoto, iindlela ezingalungiswa kakuhle, ukunqongophala kweempawu zendlela kunye nokunyanzeliswa kokhuseleko ezindleleni.
Amaninzi abulawa kwingozi yebhasi yaseLima.
Isantya esiphezulu sinegalelo kwintlekele yebhasi.
Abantwana ababini phakathi kwabo babulawa kwingozi.
Ngokwamagosa asePeruvia, ibhasi yabakhweli eyayithwele abakhweli abangama-63 yayiwele kwiliwa elikufutshane nedolophu elikomkhulu laseLima.
Ubuncinane abantu abangama-20 babulawa kwaye abangaphezu kwama-XNUMX benzakala kule ngozi. Abantwana ababini - inkwenkwana eneminyaka emithandathu ubudala kunye nentombazana eneminyaka emithathu ubudala - babephakathi kwabahambi ababhubhileyo.
Ingozi yayisePeru ingozi yesithathu yokuthuthwa kwamaxhoba amaninzi ngeentsuku ezine.
Ingozi yenzeke kwindlela emxinwa yeCarretera Central kwindlela emalunga neekhilomitha ezingama-60 (37 miles) kwimpuma yedolophu enkulu iLima. Indlela idibanisa iLima kuninzi lweendawo eziphakathi zeAndes.
Amagosa athi "ukungakhathali" kube negalelo kule ngozi, kuba ibhasi yayihamba "ngesantya esiphezulu".
Ngokweengxelo zabantu abasindayo, yabetha elityeni yaza yaya kungena enzonzobileni malunga neenyawo ezingama-650.
NgeCawe ephelileyo, abantu abangama-22 babhubhile xa izikhephe ezimbini zangqubana kumlambo iAmazon ePeru. Inani elingachazwanga lihlala lilahlekile.
Kwiintsuku ezimbini ngaphambilana, enye ibhasi yawela kumwonyo osemazantsi mpuma eli lizwe, yabulala abantu abali-17.